FREE MASTERCLASS - MAWLAMYINE, JANUARY 2016 - Yangon Photo Festival
FREE MASTERCLASS – MAWLAMYINE, JANUARY 2016
MULTIMEDIA DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY
MAWLAMYINE – Jan 22-29, 2016
As part of the 8th Yangon Photo Festival, French photojournalist Christophe Loviny, assisted by photographers Pyay Kyaw Myint and MaycoNaing, has designed this full time intensive 8 days free workshop for those who would like to study or work in the media. It will help you to expand your professional skills by creatinganarrative photo-story ready to be published on internet or inajournal. See: http://www.yangonphoto.com/photo-stories/
The best works will be shown to the public on March 19, 2016 during the 8th Yangon Photo Festival at the French Institute in Yangon. Prizes, including professional Canon SLR cameras and trips to France to study photography, will be awarded byajury presided by DawAung San SuuKyi.
Please bring your SLR camera. Canon will lend cameras to those who do not have one yet
Organized by Southern Myanmar Journalist Network and French Institute
The representative office of Mon State CSOs.
43, MyoeShaung Street, Shan Su
Out Kyin Quarter, Mawlamyine.
Pyay Kyaw Myint
More detail about Yangon Photo Festival
အခမဲ့အဆင့်မြင့်သင်တန်း – မာ(လ)တီမီဒီယာမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံပညာ
မော်လမြိုင်မြို့ - ဇန်နဝါရီလ ၂၂-၂၉ ၂၀၁၆ခုနစ်
အဌမအကြိမ်ရန်ကုန်ဓါတ်ပုံပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကိုလေ့လာချင်သူများသို့ မဟုတ် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသောဤအချိန်ပြည့်သင်တန်းကို ပြင်သစ် ဓါတ်ပုံဆရာ Christophe Loviny ၊မြန်မာဓါတ်ပုံဆရာများဖြစ်ကြသောပြေကျော်မြင့် နှင့် မေကိုနိုင် တို့ မှ ကူညီသင်ကြားပေးပါမည်။ မည်သူမဆိုအခမဲ့ ပါဝင်တက်ရောက် နိုင်ပြီးသင်တန်းပုံစံမှာအင်တာနက် သို့ ဂျာနယ်များတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြနိုင်သည့် photo-essay ခေါ် ဓါတ်ပုံဇာတ်လမ်းများကိုဆရာများ၏ အကူအညီဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရုိုက်ကူးရမည်ဖြစ်သည်။ နမူနာကြည့်ရန် http://www.yangonphoto.com/photo-stories/
သင်တန်းသားများမှ ဖန်တီးရရှိလာသောအကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံအက်ဆေးများကိုလာမည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အဌမအကြိမ် ရန်ကုန်ဓါတ်ပုံပွဲတော် တွင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြီးမှူးသောအကဲဖြတ်အဖွဲ့ မှဆုံးဖြတ်ကာ Canon EOS ကင်မရာများနှင့် ပြင်သစ်ဓါတ်ပုံပညာသင်ခရီးစဉ်များအပါအဝင် ဆုများကိုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
SLR ကင်မရာများယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကင်မရာမရှိသူများအတွက် Canon မှ ကင်မရာများငှားရမ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မွန်​ပြည်​နယ်​ အရပ်​ဖက်​အဖွဲ့ အစည်းများရုံး
အမှတ်(၄၃) မြို့ ရှောင်လမ်း| ရှမ်းစုရပ်lအောက်ကျင်းရပ်lမော်လမြိုင်မြို့  ။
၀၉ ၅၀၁၉ ၂၃၉